SHIRWEYNIHII URURKA SAXAAFADDA EE SOLJA OO LA AFDUUBAY IYO CASAABAD GACAN KU RIMIS AH OO LOO GARBA DUUBAY DUMAASHII HOGAANKII SOLJA | Saxil News Network
SHIRWEYNIHII URURKA SAXAAFADDA EE SOLJA OO LA AFDUUBAY IYO CASAABAD GACAN KU RIMIS AH OO LOO GARBA DUUBAY DUMAASHII HOGAANKII SOLJA
Hargeysa(saxilnews.com)-khilaaf weyn ayaa ka dhashay shirweynihii ururka Saxaafadda Somaliland ee SOLJA ka dib markii xulufo gaar ah loo afduubay shirweynihii ururka iyadoona kaadhadhkii shirweynaha lagu galayey badankoodii
loo diiday. Waxaana dhuumasho dhabarku muuqdo loogu gacan togaaleeyey xubno gacan ku rimis ah oo xulufo la ahaa casaabad weyd ka dhigtay ururkii saxaafadda Somaliland solja. Waxaana doorasho mad-madow badani hadheeyey lagu doortay hogaan dhicis ah oo shirgudoonkii garsooraha ahaa u kala xagliyey. Doorashadan oo badi xirfadlayaasha saxaafadu dibad joog ka ahaayeen ayaa loogu
mushxaradey koox la dhabar taabtay oo munad ahaan loogu qurxiyey madasha. Waxaana xabaalaha mako dur-duro lagu soo aasay dimuqraadiyadiii laga filayey doorashada saxaafadda Somaliland Walina waxaa kala fadhiya oo garabyo u kala jabay saxaafadii Somaliland.
Wariyeyaashii ka kala yimid goboladda qaarkood iyo wariyeyaashii Hargeysa ka hawlgalayey ayaa badankoodu dibad joog ka ahaaa shirweynahan, inkastoo shan qof oo kamid ah suxufiyiintii qaadacday loo ogolaaday inay gudaha shirweynaha soo galaan,kuwaas oo markii dambe ka biyo diiday hananka loo waddo doorashada. iyagoona madasha shirka ka dhex sheegay in aan shirweynahan loo dhamayn oo wariyeyaashii dibadda taagan yihiin.
Suxufiyiintii dibad jooga ahayd ayaa warbaahinta la hadashay, waxaanay sheegeen in shirweynahan koox gaar ahi soo abaabulatay,islamarkaana aan cid han leh oo bad-baado u ah ururka loo ogolayn.
“shirkan Saxaafaddu maaha kii saxaafadda ee waxa qabsaday xubno gaar ah oo iyagu doonaysa in aanay waligood xilalka ay hayaan ka degin, wixii shirkaasi ka soo baxo ma aqoonsani, waxaana madaxweynaha iyo cidii ay wada shaqeeyaanba u sheegayna in aanay shirkaasi ahayn kii wariyeyaasha”ayuu yidhi Aadan
Ciidle. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Hodan Isaaq oo ka mid ah hablaha dhaliilshan qaabka shirka loo waddo, waxaanay sheegeen in xubnihii hablaha uga qaybgali laha guddida fulinta kooto laga dhigay,isla markaana la diiday in si xor ah habluhu ugu tartamaan xilalka sarsare.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan suxufiyiinta ka hawlgala Somaliland waxay si weyn uga soo horjeesteen shirkan, waxaanay qaarkood ku dhowaaqeen inay ururo kale samaysanayaan